ရောဂါကင်းချင်ရင် အစိမ်းမစားသင့်တဲ့အရာများ - Hello Sayarwon
Yun Sandi Nan Mon မှ ရေးသားသည်။ 16/09/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အစိမ်းစားလို့မရတာ အသားနဲ့ငါးပဲရှိတယ်လို့ အရင်ကပြောကြပေမယ့် အခုဆို အသား၊ငါးတွေကို အစိမ်းပြင်ဆင်ထားတဲ့မီနူးတွေ ဟိုတယ်စာတွေမှာပါတွေ့နေရပါပြီ။ ထိုင်းစတိုင် ပုဇွန်အစိမ်းသုပ်တို့၊ ဂျပန်စတိုင်၊ ကိုရီးယားစတိုင် ငါးအသားလွှာတို့ဘာတို့ ကြိုက်ကြတယ်မလား။
အစိမ်းစားတာက အစာအဆိပ်သင့်တာကလွဲရင် ချက်ချင်းတော့ အသက်အန္တရာယ်မရှိနိုင်တော့လည်း စားလို့ရတယ်လို့ပြောကြမှာပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေဆိုရင်တော့ အစိမ်းမစားသင့်တဲ့အရာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။ ဘယ်အစားအစာတွေကိုရှောင်သင့်လဲ၊ ဘာကြောင့်ရှောင်သင့်လဲ ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်နော်။
သိပ်ကိုလူကြိုက်များတဲ့ ဆူရှီတွေကို ထိခိုက်စေလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ထမင်းရယ်၊ရေညှိရယ်၊ အသီးအရွက်၊ အသားငါးပင်လယ်စာ၊ ကြက်ဥနဲ့လုပ်တဲ့ မာရိုးနစ်တို့ပါဝင်လို့ အာဟာရပြည့်တဲ့အစားအစာတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် အသား၊ပင်လယ်စာတွေကို အစိမ်းထည့်ထားတာတော့ မစားသင့်ပါဘူး။ ပျို့အန်တာ၊ ဝမ်းပျက်တာ၊ ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့anisakiasis လို ကပ်ပါးပိုးတွေနဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေပါလာနိုင်ပါတယ်။
ကလေးသူငယ်တွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ နို့တိုက်မိခင်တွေနဲ့ ကိုယ်ခံအားနည်းတဲ့သူတွေဆို ပိုပြီးသတိထားသင့်ပါတယ်။ သူ့ဒေသရေမြေအနေအထား အပူချိန်၊လတ်ဆတ်မှု၊ တာရှည်ခံမှုတို့က ဒီမှာဆိုရင် ကွဲပြားနိုင်တာမို့ ဂျပန်စတိုင်အတိုင်း အစိမ်းမစားသင့်ပါဘူး။
ဝက်သားကို အစိမ်းစားလေ့မရှိကြပေမယ့် မကျက်တကျက်တော့ စားမိနိုင်ပါတယ်။ လတ်ဆတ်မှုအားနည်းတဲ့အသားတွေကို အကင်အဖြစ်စားမိရင်salmonella၊E. coli, နဲ့ listeria တို့လို ဘက်တီးရီးယားတွေရသွားနိုင်ပါတယ်။ ဝက်သားဆိုတာ အပူပြင်းပြင်းနဲ့ ကျက်အောက်ချက်ပြုတ်ပြီး ကျက်ရင်တောင် အနည်းဆုံး ၃ မိနစ်လောက် ထားပြီးမှ စားသင့်တဲ့အသားပါ။
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ အစားအသောက်တွေ နိုင်ငံအချင်းချင်းဖလှယ်လာကြတဲ့အခါ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်တွေထဲကလိုရေဘဝဲအစိမ်းတို့၊ ကမာအစိမ်းတို့ စားချင်လာကြမှာပဲ။ရေဘဝဲကိုတော့ ဂျပန်ဆိုင်မှာ အစိမ်းသုပ်စားမိနိုင်တယ်၊ ကမာဆိုလည်းဈေးကြီးပေးပြီး မှာယူစားသုံးလာကြပါတယ်။ ကမာကောင်အစိမ်းကနေ အသည်းရောင်အေပိုးကို ကူးစက်ပြန့်ပွားနိုင်ပါတယ်။
ပုဇွန် သို့မဟုတ် ပင်လယ်စာတွေကို သံပရာသီးနဲ့ အစိမ်းသုပ်တာဟာ ဆူရှီမှာလိုပဲ အစာအဆိပ်သင့်စေနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ၊ ကပ်ပါးပိုးတွေပါလာနိုင်ပါတယ်။ ပုဇွန်အကွေး ငါးအနွေးလို့ပြောပြီး မကျက်တကျက်တွေ စားနေကြတာက သိပ်တော့မကောင်းပါဘူး။ပြန်နွှေးစားတဲ့အခါမှာလည်း အပူပြင်းပြင်းနဲ့နွှေးသင့်ပါတယ်။
ကြက်ဥအစိမ်းတွေမှာ အစာအဆိပ်သင့်စေနိုင်တဲ့salmonella ပါနေနိုင်ပါတယ်။ အားရှိအောင်ဆိုပြီး အစိမ်းဖောက်သောက်တာတွေက မကောင်းပါဘူး။ အလွန်ဆုံး ကာကျက်၊ ဟက်ဖ်ဘွိုင်လောက်တော့ စားပါ။
ကြက်အူချောင်းလို့တော့ခေါ်လိုက်တာပဲ။ ဒီမှာကဟော့ဒေါ့လို့လည်းခေါ်တယ်၊ခေါက်ဆွဲပြုတ်ထဲ၊ဟော့ပေါ့ထဲထည့်စားကြတယ်လေ။ပြုပြင်စီမံထားတာဘာညာ အသာထား။ အရေးကြီးတာက အသင့်စားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟော့ဒေါ့ချောင်းတွေကို ဒီအတိုင်းမစားလိုက်ဖို့ပါပဲ။ အနည်းဆုံးတော့ အပူပေးပြီးမှစားသင့်ပါတယ်။ သူတို့မှာListeria ဘက်တီးရီးယားပါဝင်နိုင်လို့ အပူပေးသင့်ပါတယ်။
ပုံမှန်ဆိုမစားကြပေမယ့် အရသာချိုပြီးနူးညံ့တာကြောင့် တို့စရာအဖြစ် အစိမ်းစားသူတွေရှိပါတယ်။ ခရမ်းသီးအစိမ်းမှာsolanine ဆိုတဲ့ဓါတ်ပါဝင်တာကြောင့် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နုတဲ့ ခရမ်းသီးမှာ ဒီဓါတ်ပိုများတတ်တာကြောင့် သတိထားစားပါ။
Hello Health Groupသည် ဆေးပညာဆိုင်ရာ အကြံပေးချက်များ၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ကုသခြင်းများ မပြုလုပ်ပေးပါ။
Accessed Feb 15, 2019.
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးအာနိသင်များ
အသားတွေထဲမှာ ဝက်သား ကိုအကြိုက်ဆုံးလား ။ ။